Social Networking Etiquette - SNOB မဖြစ်ပါနှင့် Martech Zone
Social Networking Etiquette - SNOB မဖြစ်ရ
ကြာသပတေးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 30, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဤအလိုအလြောကျအငွေ့ပျံနေခဲ့တာပေမယ့်ငါကဆက်ပြောသည်သွားမယ်, ပြောပါ, အင်တာနက်ကမ္ဘာ၏ကျန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသကဲ့သို့တူညီသော ** တွင်းအပေါက်ရှိပါတယ်။ ဟေ့ ... phew ငါကပြောပါတယ်။ ငါပိုကောင်းတယ်။
ဒီမှာကျွန်တော့်အမဲသားပါ လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်အကောင်းဆုံးအရာ… hmmmm …။ ကောင်းပြီ၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်၌အကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ ကျွန်ုပ်၏သဘောထားကွဲလွဲမှုများ၊ အတွေးအခေါ်များနှင့်ကန့်ကွက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ အခြားသူများ၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်ကြားရတာကိုသဘောကျတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝဘ်သည်ပြီးပြည့်စုံသော၊ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုတသမတ်တည်းလည်ပတ်နေသောစာဖတ်သူများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအလွန်နှစ်သက်သောဘလော့ဂါများရှိသည်။
ဒါကဘာဖြစ်လို့ဒီအသိုင်းအဝိုင်းမှာတစ်ယောက်ယောက်ကဘာကြောင့်မရိုးသားတာလဲ။ သူတို့၏ဘ ၀ နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းသောသို့ဖြစ်ရာသူတို့အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ၀ င်ရောက်ပြီးသူတို့၏စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုအခြားသူများအားဖြန့်ဝေရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ဘာတွေလုပ်ရမည်နည်း။ မင်းဘဝကဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသလဲ
မကြာသေးမီကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်များသည်ငါ့ထံသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်ုပ်၏ကုဒ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် Reddit.com '' gizmo '' အမည်ရှိ Genting ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငါ gizmo မသိဘူး, ဒါပေမယ့်ငါသူ့ကိုအချိန်ကိုယူ။ link ကို posting တန်ဖိုးထားတယ်။
မှတ်ချက်များထွက်စစ်ဆေး! SNOBS! ငါ့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေထဲကတစ်ခုက Planet ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ပိုကောင်းတယ် Ajaxian။ ထိုမှတ်ချက်များကိုကြည့်ပါ။ ရုံလွင်ပြင်နာကျင်။ ငါချရဖို့မမေးခဲ့ပါဘူး။ ငါ့မှာအေးမြတဲ့ကိရိယာတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါကနည်းပညာကောင်းတွေသုံးတယ်၊ အခမဲ့ပင်။ ဘယ်သူမှဒီကိုမသွားရဘူး၊ သူတို့လုပ်ရင်သူတို့ကပိုက်ဆံမပေးရဘူး။
အဓိကအချက်မှာ SNOB ဖြစ်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။ အကြံဥာဏ်များ၊ အကြံဥာဏ်များ၊ အကြံဥာဏ်များ၊ စိုးရိမ်မှုများ၊ ညွှန်ပြချက်များ၊ အပြုသဘောဆောင်သောဝေဖန်မှုများပေးခြင်းသည်ဤနည်းလမ်းများအားလုံးသည်လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ၎င်းအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အရာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုးတက်ပြောင်းလဲလာစေရန်ကူညီပေးသောအရာများဖြစ်သည်။ SNOB ဖြစ်ခြင်းသည်ဘာမှမကူညီနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် 'လူမှုကွန်ယက်' အတွက်တန်ဖိုးမရှိပါ။
ကောင်းပြီ ... ငါ့ rant ၏အလုံအလောက် SNOB ဆိုတာဘာလဲ နောက်တစ်ချိန်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး သည်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုပေါ်တွင်ယုတ်ညံ့သော၊ မလေးစားသောသို့မဟုတ်လတ်တလောမသိဘဲဖြစ်နေသည်ဆိုပါကသူတို့ကိုသင်၏ညာဘက်ရှိဂရပ်ဖစ်ကိုပေးပို့နိုင်သည်။ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိစေကာမူမည်သည့်ဂရပ်ဖစ်ကိုမဆိုအသုံးပြုရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအပြည့်အဝရှင်းပြချက်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုဒီမှာပို့ပါ။
တဖန်သင်သည် SNOB ဖြစ်ပါကဆက်လုပ်ပါ။ ငါ့ကိုဤအလျှင်းလျှို့ဝှက်မနှောင့်ရှက်ပါနဲ့ - ငါကပယ်ဖျက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီဇင်ဘာ 1, 2006 မှာ 6: 44 AM
Doug၊ Ajax Planet မှာရှိနေတဲ့ ဒီလူဆိုးလေးတွေအကြောင်း ပြောပြဖို့အတွက် မင်းရဲ့ carpal tunnel ကို မီးတောက်ခဲ့ရလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ လူအစုအဝေးတိုင်းတွင် မုဆိုးမများ ရှိသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ သူတို့အတွက် ဆုတောင်းပါ။ ဒါ သူလုပ်မှာပဲ။ ပြီးတော့ မင်းလုပ်နေတာတွေကို ဆက်လုပ်ပါ။ မင်းက ငါ့အတွက် အတုယူစရာပဲ။
1:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 14 တွင်
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့၊ အပြင်မှာ လိုချင်တပ်မက်ဖွယ် အနိုင်ကျင့်သူ အများအပြား ရှိနေပြီး အင်တာနက်မှာ “အမည်မသိ” ဖြစ်နေလို့ နှောင့်ယှက် နှိုးဆော်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ် sh***။ တစ်ချို့လူတွေက ဖင်ပေါက်ကနေ ရုန်းထွက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်မြင်ပုံက သူတို့ဟာ သနားစရာ၊ အထီးကျန်တဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်ပြီး တုံ့ပြန်မှု ဒါမှမဟုတ် စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ မထိုက်တန်ပါဘူး။
1:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 2, 33 တွင်
1:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 13 တွင်
မင်းရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို ငါ မကူညီနိုင်ဘဲ ရယ်မောလိုက်ပါ။ အချိန်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 39 တွင်
ပံ့ပိုးမှုအတွက် Pat နှင့် CJ တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
5:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 7, 55 တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကားလ်။ သင့်အကြံပြုချက်အပေါ် အခြေခံ၍ CC လိုင်စင်ကို စာမျက်နှာအောက်ခြေတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
5:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 7, 00 တွင်
ဒီတိုးများလာတဲ့လမ်းကြောင်းကို တစ်ယောက်ယောက်က ဘယ်အချိန်မှာ ရောက်သွားမှာလဲလို့ တွေးနေမိတယ်။ မင်းရဲ့တံဆိပ်ကို ငှားပြီး တခြားသူတွေကို ပို့ပေးမယ်။ ဒါကြောင့် CC လိုင်စင်လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
6:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 39 တွင်
Doug ငါတို့အားလုံး မင်းကိုချစ်တယ်၊ ငါတို့က ဖင်ကို နှပ်ထားဖို့ လိုသလား၊ ငါ့ကို အကြောင်းကြားရင် တတ်နိုင်သလောက် ယောက်ျားလေးတွေ ရှာဖို့ ငါကြိုးစားမယ်။ ငါလုပ်နိုင်ပေမယ့် ကြာကြာမခံဘူး။